Ukupakisha kunye nokuhambisa: zeziphi iintlobo ezikhoyo kwaye zeziphi ezilungileyo | Ezezimali
Encarni Arcoya | | iinkampani
Xa uneshishini kwaye kufuneka uthumele iimveliso kubathengi, awusoloko une-A okanye u-B. Oko kukuthi, awunandlela yokuzithumela ebhokisini okanye kwimvulophu. Ngokwenyani ikho Iindidi ezininzi zokupakisha, zombini kwiibhokisi nakwi imeko yeemvulophu. Okufanayo kuya kukhetho lokuhambisa. Ayisiyiyo kuphela ukuba ungasebenzisa iCorreos, nawe unayo iinkampani ezininzi zekhuriya ezijongene nokuthatha ii-odolo kubamkeli bazo.
Ukuba awuzange ume ukucinga ngawo ngaphambili kwaye ngoku ufuna ukwazi ukuba yeyiphi na into onokuyisebenzisa, iindlela ezahlukeneyo zokuyisebenzisa, okanye iindlela onokukhetha ukuzithumela iimveliso zakho, apha siza kuthetha ngazo zonke ngezantsi. Ke, unokuthatha ingqalelo ukuthunyelwa njengendlela yokwahlula ngokubhekisele kukhuphiswano.
1 Kutheni izinto zithunyelwa njengemicimbi
2 Iindidi zokupakisha zeenkampani
3 Iinketho zokuhambisa: yeyiphi engcono?
Kutheni izinto zithunyelwa njengemicimbi
Xa umntu ebeka i-odolo kwi-intanethi (okanye ngayo nayiphi na enye indlela ebandakanya ukuyifumana ekhaya okanye eofisini ngekhuriya okanye ngeposi), siyazi ukuba eyona nto banokujonga kuyo kukupakishwa. Kubo eyona nto ibalulekileyo yile ingaphakathi. Nangona kunjalo, inyani kukuba ukukhathalela "umbono wokuqala" owenzayo kubaluleke okanye kubaluleke ngakumbi njengokukhusela okungaphakathi.
Ke ngoko, xa usebenza ngokupakisha okungafaniyo, kubalulekile fumana eyona ilungileyo ngokwentlobo yemveliso ofuna ukuyithumela; ayikukuthintela ukonakala kuphela, kodwa nangenxa yokuba unokwenza uluvo lweenkcukacha ezenza ukuba umntu aphindaphinde xa uthenga kwakhona.
Sebenzisa iibhokisi ezinemibala, kunye nelogo yenkampani, okanye iribhoni ebhalwe igama (enombala, enegama lenkampani, eneenkcukacha okanye imifanekiso, njl.njl.
Ingxaki kukuba, xa kufikwa ekuthumeleni, sihlala sicinga ukuba zimbini kuphela iindlela onokukhetha kuzo: imvulophu okanye ibhokisi. Kodwa enyanisweni, zininzi ngakumbi.
Iindidi zokupakisha zeenkampani
Khawufane ucinge ukuba kuya kufuneka uthumele imveliso. Into eqhelekileyo kukuba ucinga ukuyithumela ebhokisini kwaye yiyo loo nto kodwa, ukuba incinci kakhulu, endaweni yebhokisi unokujonga ibhegi, okanye imvulophu. Okanye mhlawumbi ibhokisi encinci. Kwimarike yokupakisha, zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Kuxhomekeka kwimathiriyeli, unokufumana oku kulandelayo:
Iipelethi: Zizona zikhetho zikhulu ezenza kube lula ukuhambisa iimpahla ezinzima ngelixa zikhuselwe kuwo onke amacala.
Izikhongozeli: Yindlela yokuthumela ngenqanawa enkulu yorhwebo, kuba sithetha ngezinto ezinkulu ezinomthamo omkhulu kwaye zisetyenziselwa ukuhambisa ukuthengiswa ngomhlaba, ulwandle okanye umoya.
Iingxowa: Ayabizi kakhulu, kwaye uninzi lwawo luhlala luza nesongezo seqamza ukukhusela ngaphakathi. Okokugqibela kunyusa ixabiso kancinci kodwa ngaphakathi kokupakisha, abiza kakhulu.
Iimvulophu:Imeko yeemvulophu iyafana nale ingasentla. Kukho ubukhulu obukhulu, obunobunzima obukhulu okanye obuncinci, ngokusongelwa kwebhola ukukhusela ingaphakathi, njl. Ixabiso layo lijikeleze elengxowa kuba zitshiphu kakhulu. Uninzi lwenziwe ngephepha lobunzima obahlukeneyo okanye ikhadibhodi (enzima okanye ethambileyo, ixhomekeke kubukhulu).
Iingxowa: Iingxowa zinkulu kakhulu kuneengxowa okanye iimvulophu, kwaye nangona zingenziwa nangamaphepha, uhlala uzifumana zenziwe ngeplastiki okanye ngelaphu. Injongo yayo kukukhusela okungaphakathi, yiyo loo nto zenziwe zaneendidi ezahlukeneyo ezathi zakugcwaliswa zavalwa.
Iingxowa sawa: Le pakisha inempawu yokuba inomoya oxineneyo xa ivaliwe, ngohlobo lokuba ikhusele iimveliso ukuze zingahambi nangaliphi na ixesha. Xa uvula, umoya uyaphuma kwaye imveliso ayisebenzi. Kubiza kakhulu kuneengxowa eziqhelekileyo, ngenxa yenkqubo ephetheyo.
Iibhokisi: Iibhokisi zizinto zehlabathi liphela. Ayisiyiyo kuphela iibhokisi zekhadibhodi ozifumanayo, kodwa zikhona ezinye ezinzima, iibhokisi ze-thermal (ezijamelana nokubanda okanye ubushushu, iibhokisi zemodyuli (ukubeka enye ngaphakathi kwenye) ... Ezona zixabiso liphantsi zezona zisisiseko, Ezona zisetyenziswa kakhulu ngamashishini kunye neemvulophu kunye neengxowa.
Iinketho zokuhambisa: yeyiphi engcono?
Nje ukuba wazi iintlobo zokupakisha, kunye neyona ndlela inexabiso eliphantsi onokukhetha kuyo, ukuhambisa yenye indawo ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele. Kuba akukho Posi kuphela; kunye neenkampani zekhuriya. Kwaye ngaphakathi kwezi, zininzi onokukhetha kuzo (ayizizo kuphela ezaziwayo njengeSeur, MRW, Correos Express, Nacex, DHL, njl.) Kodwa kukho ezinye ezingaziwayo kodwa ezinokuba yinzuzo kakhulu.
Ngokubanzi, Into ekufuneka uyithathele ingqalelo kukuya kweemveliso oza kuzithengisa. Ukuba ezi zihlala zizezesizwe, oko kukuthi, ukuhambisa kwilizwe elinye, unokukhetha iinkampani ezigubungela zonke izixeko kwaye zikunika nexabiso elifanelekileyo; Kodwa ukuba ukuthunyelwa kwakho kungamazwe aphesheya, kufanelekile ukuseka isivumelwano okanye intsebenziswano nenkampani yokujongana neyesizwe neyamazwe aphesheya.
Leliphi elona xabiso liphantsi? Ngaphandle kwamathandabuzo, iPosi. Gcina ukhumbula ukuba le nkampani inokukhetha ukuba abantu abaziqeshileyo (ngakumbi ukuba babhalisiwe kumacandelo athile e-IAE) banokuthumela iimveliso ngamaxabiso afikelelekayo. Umzekelo, incwadi enokukuxabisa phakathi kwe-3 kunye ne-7 ye-euro, inokuxabisa usomashishini 30-50 iisenti ukuyithumela. Ukuba sifuna ukukuqinisekisa, ukunyuka akuphezulu kakhulu.
Kwelinye icala, ngabathumeli ixabiso lihlala liphezulu; Ingakumbi ukuba ekuqaleni kweshishini lakho awunayo ii-odolo ezininzi. Ukuba kukho umthamo omkhulu wokuthunyelwa, inkampani ibonelela ngexabiso elifikelelekayo, kodwa ihlala ingafani neCorreos.
Ngoku, kuwo omabini la matyala kukho izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Umzekelo, eCorreos unengxaki yokuba, amaxesha amaninzi iimveliso azifiki ngexesha, okanye zilahlekile. Okwangoku Iikhuriya ziyahlangabezana nomhla obekiweyo wokuhanjiswa. Nangona kungakhululwa ekuhluphekeni kwintengiso, ukuba ilahlekile, njl.
Ukuphendula ukuba yeyiphi kwezi zimbini ezilula kunzima. Njengoqoqosho ngakumbi, iCorreos; ngokusebenza ngakumbi, abathumeli. Olona khetho lulungileyo? Nika umthengi ukhetho. Ngale ndlela, yenza isigqibo ngokusekwe kwixesha lokulinda okanye kwixabiso lenkonzo yokuhambisa enokuba nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Ukupakisha kunye nokuhambisa: zeziphi iintlobo ezikhoyo kwaye zeziphi ezilungileyo
Yari rodriguez sitsho
Ukugqwesa, enkosi ngolwazi.
Phendula u-Yari Rodriguez